Siouxland Public Media News: Oromo | KWIT
Hosted by Fatiya Adam
News for the Siouxland region in Oromo. Produced in partnership with the Mary J Treglia Community House.
Oromo News 03/31/2021
By Besama Abdela • Mar 31, 2021
Talaali corona virus torbaan dhufti irraa State Siouxland Sadii keessati akka banamee nama hundaa kennamu himan.
State Nebraska nama umriin isaani 18 fi sanii ol ta’anii hundaafu guyyaa wiyxata April 5th irraa jalqabee akka talaali kennamu karoorfatan.
Oromo News: 03.26.2021
By Besama Abdela • Mar 26, 2021
Oromo News 03.26.2021
Oromo News 03/26/2021
Galatooma caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Besama.
Deparmantiin mana fayyaa south Dakota guyyaa har’aa akka gabaaseti gosti Covid-19 lama yeroo amma state keessati kan argamu yoo tau, akkuma Uk keessati namni qabamu akkuma itti fufetti jira. State ammas nama haarawa due sadii yoo tu namni haarawa qabame 254 dha.
Oromo News 03.24.2021
Marsaa haarawa maneen kiraa fi qarqaarasa biraa jiraattota Iowa dhaaf kan sababa Covid-19 miidhaman qarqaarsa jia 12 gahu kan godhamu ta’a. Governor Kim Reynolds oduu guyyaa kan conference har’aa irrati ibsite jirti.
Oromo News 03.22.2021
By Fatiya Adam • Mar 22, 2021
Oromo News 03/22/2021
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka mullisutti jiraattoni Iowa million qixxee ta’an talaali Covid-19 fudhatanii akka jiran himan.
Governor Iowa Kim Reynolds talaali corona virus nama umriin 16 fi sanii olta’an akka banamu himte.
Siouxland District Health talaali corona virus dhaaf clinic Tyson bane wiyxata fi kibxata dhuftu irraa beelama kennuudhaf jiraatota Woodbury County dhaaf akka baname himan.
Oromo News 03/19/2021
By Fatiya Adam • Mar 19, 2021
Deparmantiin mana fayyaa Iowa guyyaa har’aa namni 6 sababa Covid-19 du’uu gabaasan, namni haarawa qabame ammo 600 dha. Kanniin keessa parsantiin 10% kan dhufee Woodbury County keessaayi. Hangaa ammaatu Long-term care facilities keessati kan baayate hin jiruu.
vaccine online dashboard irratti akka mullisutti jiraattoni Iowa 447,000 ol ta’an talaali corna virus guututti akka fudhatanii jiran himan.
Oromo News 03.19.2021
Talaalli, Iowa keessati akkuma fufetti jira haatau male deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti namni haarawa guyyaa Covid-19 due 9 yoo tau kan qabame ammo 404 dha. Woodbury County keessati, namni haarawa qabame seaati 24 keessati nama 25 dha.
Oromo News 03.17.2021
By Fatiya Adam • Mar 17, 2021
Gov. Kim Reynolds jiraattoni Iowa hundinuu hanga April 5th tti talaali Covid-19 argachuu akka danda’an himan.
Reynolds akka jetteti talaali corona virus akka mootuma fedraala kaahameti kan eegamu hanga dhumaati akka tae himte.
Ogeessi White House akka jedhetti March 29th irraa jalqabee baayyiinan guddaan gudisuun kan yaalamu akka tae hime jira. Kunis haala state torbaan toko keessatin argattu haala laman dabaluu akka malus himan.
Oromo News 03.16.2021
By Fatiya Adam • Mar 16, 2021
Oromo News 03/16/2021
Deparmantiin mana fayyaa Siouxland lama keessati corona virus gosa haarawa kan U.K argamee turee akka argamee himan.
Guyyaa har’a, Director mana fayyaa Siouxland akka jedhetti virus gosa haarawa kuni March jalqaba irrati Woodbury County keessati argamuu isaa himan. Namni biraa haaroyni hin qabamne.
Deparamantiin mana fayyaa Nebraska akka gabaasanitti gosti virus Covid-19 kan United Kingdom keessat
By Fatiya Adam • Mar 15, 2021
Oromo News 03/15/2021
Deparamantiin mana fayyaa Nebraska akka gabaasanitti gosti virus Covid-19 kan United Kingdom keessati argamee turee Northeast Nebraska Public Health kaan Siouxland keessati jiru argamee jira. Kunis kan walqabatu counties dhan kan Cedar, Dixon, Thurston, fi Wayne dha. Virus kunis kaan irra kan dadaffee namatti taruufi kan baaye nama dhukubsu akka taes himanu jiran.
Waraani state Iowa Covid-19 waliin godhan akkuma fufeti jira
By Fatiya Adam • Mar 12, 2021
Oromo News 03/12/2021
Waraani state Iowa Covid-19 waliin godhan akkuma fufeti jira. Iowa keessati talaali corona virus million 1 tau kennamee jira. Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka jedhetti guyaa jimaata talaali corona virus 1.03 million tau argattee jirti. Gabaasni million lakkaahamu akka talaali corona virus dabaluu godhee jira garuu jia dhuftu keessati namni guddaan bayen waan fudhataniif biyyatin fedhi dabalataan maal akka godhu hin beekamne.
Deparmantiin mana fayyaa Iowa guyyaa har’aa nama Covid-19 haarawa due 19 fi nama haarawa qabame 412
By Fatiya Adam • Mar 11, 2021
Oromo News 03/11/2021
Deparmantiin mana fayyaa Iowa guyyaa har’aa nama Covid-19 haarawa due 19 fi nama haarawa qabame 412 akka tae gabaasani jiran.
Deparmantiin akka jedheti Woodbury County, se’aati 24 keessati namni 31 akka qabame gabaasan. Qooranno bulti 14 Woodbury County keessatti godhamen nama qabame jiru parsanti 6.4% akka tae himan, kunis guyyaa kaleessa irraa kan hin jijjiiraminiidha.
Yeroo Hiriira nagahaa irrati pepper-sprayed facaasufi poolisin hidham gaazexanyaadhan warri murti a
Oromo News 03/10/2021
Yeroo Hiriira nagahaa irrati pepper-sprayed facaasufi poolisin hidham gaazexanyaadhan warri murti akka bilisa bahan himan. Mormittooni dhima dhiiba mirgaa irrati miidhuuf itti xiyyeefatan fi seera murti mootuma haala hin taanen fayyadamu kan dhoogudha.
Guyyaan har’aa kabajaa wagga tokkoffaa Iowa keessati sababa Covid-19 du’aniidha. Akka virus kun jalq
By Fatiya Adam • Mar 8, 2021
Oromo News 03/08/2021
Guyyaan har’aa kabajaa wagga tokkoffaa Iowa keessati sababa Covid-19 du’aniidha. Akka virus kun jalqabe irraa namni waliigalatti due 5,559 dha, nama Woodbury County keessati due 214 dabalate.
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasanitti guyyaa har’aa namni tokko dabalataan akka due gabaasan, namni haarawa qabame ammo 140 dha, nama Woodbury County keessati haarawa 8 qabame dabalate.
Oduu dinagdee guddaan Sioux City downtown walgahee jira. Capital Ho-Chunk guyyaa har’aa bakkee busin
By Fatiya Adam • Mar 5, 2021
Oromo News 03/05/2021
Oduu dinagdee guddaan Sioux City downtown walgahee jira. Capital Ho-Chunk guyyaa har’aa bakkee businesses karaa Historic Fourth Street irrati maatii Aalfa irra bituudhan xumuree jira. Kunis waajjira ijoo ijaarsa kan Aalfs , Buffalo Alice, Antiques kan historic fourth irra jiruu, M’s 4th irraa fi SoHo kan ufkeesa qabtuudha.
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaaseti sababa Covid-19 Woodbury County keessati namni haarawa
By Fatiya Adam • Mar 4, 2021
Oromo News 03/04/2021
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaaseti sababa Covid-19 Woodbury County keessati namni haarawa 3 akka due fi 35 akka haarawa qabame gabaafame jira. Woodbury County keessati waligalatti akka dhukubni jalqabe irraa namni 214 akka due jiru gabaasani jiran.
Long-term care facilities Iowa keessa yeroo ammaa rakkoon hin jirre kana keessati virus baaye kan mulattuudha.
Department mana fayyaa Iowa akka biyyati guututi namni haarawa sababa Covid-19 due 3 yoo ta’u namni
By Fatiya Adam • Mar 3, 2021
Oromo News 03/03/2021
Department mana fayyaa Iowa akka biyyati guututi namni haarawa sababa Covid-19 due 3 yoo ta’u namni haarawa qabame amoo 600 oldha, nama 28 haarawa kan qabame kan Woodbury County dabalatee.
Guyyaa har’aa, deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti namni haarawa corona virus due akka biy
By Fatiya Adam • Mar 1, 2021
Oromo News 03/01/2021
Guyyaa har’aa, deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti namni haarawa corona virus due akka biyyati guutti nama tokko yoo tau, waliigalatti akka dhukubni dhufe irraa namni duemmoo 5,472 dha. Namni haarawa qabame ammo nama 200 yoo ta’u nama Woodbury County keessati qabame sadii dabalate.
State Iowa odeefanno dabalataa waaye talaali corona virus irrati akka namni argatuuf guyyaa borii we
By Fatiya Adam • Feb 25, 2021
Oromo News 02/25/2021
State Iowa odeefanno dabalataa waaye talaali corona virus irrati akka namni argatuuf guyyaa borii website haarawa nibanu.
Haata’u malee, governor haasaha qaazexa guyyaa har’aa irrati akka haasawanni ammoon booda talaali corona virus dhaaf akka website www.vaccinate.iowa.gov irrati akka beelame qabachuun hin danda’amne himan.
Dameen mana fayya Iowa akka gabaasetti sababa corona virus namni haarawa du’e 15 akka ta’e gabaasni
By Fatiya Adam • Feb 24, 2021
Oromo News 02/24/2021
Dameen mana fayya Iowa akka gabaasetti sababa corona virus namni haarawa du’e 15 akka ta’e gabaasni jiran. Se’aati 24 darbe keessati namni 700 ol haarowni akka qabame gabaasan, nama 26 Woodbury County keessa dabalatee. Qorannoo bulti 14 keessati godhame Woodbury County keessati namni qabame parsantiidhan wayta kaahamu 5.4% gahee jira.
Lakkoofsi jiraattota Iowa sababa Covid-19 duanii waliigalatti nama 5,400 guyyaa kibxataa gahee jira
By Fatiya Adam • Feb 23, 2021
Oromo News 02/23/2021
Lakkoofsi jiraattota Iowa sababa Covid-19 duanii waliigalatti nama 5,400 guyyaa kibxataa gahee jira. Deparmantin mana fayyaa kan Iowa seati 24 darbe keessati namni haarawa sababa corona virus due 26 dha, woodbury kessati nama tokko kan har’a due dabalatee, waliigalatti Woodbury County keessati namni due 211 dha.
Waliigala state keessati nama haarawa qabame 600 yoo tau 18 kan Woodbury County keessatti argamaniidha.
Itti gaafatamtoonni Nebraska naamunan dhan kan dhiyaatef irrati hundaa,un qorannoo corona virus irra
By Fatiya Adam • Feb 22, 2021
Oromo News 02/22/2021
Itti gaafatamtoonni Nebraska naamunan dhan kan dhiyaatef irrati hundaa,un qorannoo corona virus irrati gochuu jirani. Hanga ammaati qoranoon United Kingdom fi South Africa tti yeroo jalqabaati virus addaa addaa kan bahe addaan bahe hin beekamne. Garuu qorattooni dandeeti virus qabuufi malattoo kannama irrati mulattu kan ulfaatuf mutation argatanii jiru.
Anaan mana fayaa Siouxland akka guyyaa har’aa gabaasanitti namni haarawa sababa Covid-19 Woodbury Co
By Fatiya Adam • Feb 19, 2021
Oromo News 02/19/2021
Governor Nebraska akka jedhetti jiraattoni waliigala talaali Covid-19 kan fudhachuu jalqaban April f
By Fatiya Adam • Feb 18, 2021
Oromo News 02/18/2021
Governor Nebraska akka jedhetti jiraattoni waliigala talaali Covid-19 kan fudhachuu jalqaban April fi May irraa akka tae hime.
Pete Ricketts gatii Johnson fi Johnson akka talaalin kennamu baayatu godhama.
State talaali kennuu kan jalqabu nama umriin isaa 50 hanga 64 ta’eedhani, kan itti aanu ammo 16-40 dha.
Guyyaa haraa, deparmantiin mana fayaa Iowa namni haarawa covid-19 due 43 tauu himan, nama 2 Woodbury
By Fatiya Adam • Feb 17, 2021
Oromo News 02/17/2021
Guyyaa haraa, deparmantiin mana fayaa Iowa namni haarawa covid-19 due 43 tauu himan, nama 2 Woodbury County keessati due dabalatee. Namni haarawa qabama 600 dha. Namni hospitaala Sioux City lama keessati sababa corona virus gale guyyaa har’aa nama baaye dabaluu himan. Haata’u malee, lakkoofsi suni parsantii 11% kan December 1st 108 dha.
Guyyaa lamaffaa kan Artic temperature naannawa Midwest prompted humni akkaa addaan cite yoo tau kibx
By Fatiya Adam • Feb 16, 2021
Guyyaa lamaffaa kan Artic temperature naannawa Midwest prompted humni akkaa addaan cite yoo tau kibxata ganamaas Nebraska kessati Iowa energy dhaaf bilbilame jira.Utilities Nebraska guddichi akka jedhetti power outage halkan gara hanamaati kan addaan citeedha. Garuu guyyaa qixxee booda dabalataan addaan cituun nimala.
Dubbataan MidAmerican Energy akka jedhetti campanichi wayta qorraa kanatti maamiltoota irraa electrikin akka addaan hin cinnee gochuudhaf akka qophoo tahan himan.
Guyyaa har’aa qorrii mana barumsa Sioux City akka turee jalqabu godhee jira.
Siouxland hanga guya kibxata ganama seati 9 a.m ttii haali qilleensa qorraa akeekachiisa jala jirti
By Fatiya Adam • Feb 15, 2021
Oromo News 02/15/2021
Siouxland hanga guya kibxata ganama seati 9 a.m ttii haali qilleensa qorraa akeekachiisa jala jirti. National Weather Service akka jedhanitti haalli qilleensa qorraa parsanti 40 gad baaye kan sodaachisuudha jedhan.
Halkan edaa haalli qilleensa biyyattii keessatti, Sioux City dabalata haalli qilleensa -28 ture.
Bulchittoni state talaali kennuudhaf magaalan duubatti hafan torbaan dhuftu keessa akka kennu jalqab
By Fatiya Adam • Feb 12, 2021
Oromo News 02/12/2021
Bulchittoni state talaali kennuudhaf magaalan duubatti hafan torbaan dhuftu keessa akka kennu jalqabuu hedan himan, akkaata gabaasa radio Iowati. Talaalichi kan qophaahu jiraattota irrati hundaate. Deparmantiin mana fayyaa Iowa ittigafatamtun Kelly Garcia akka jetteti county dhan keessati yoo xiqaate talaali parsanti 80% akka argatan himame. Garcia kara bilbilaan comment isii AARP kennite. County shanan maqaa hin dhoyne.
Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya
Oromo News 02/11/2021
Guyyaa har’aa, state Iowa akka gabaasanitti sababa Covid-19 namni 22 dueefi namni haarawa qabame ammo 841 akka tae gabaasan, akka gabaasa deparmantii mana fayyaa Iowati.
Waliigalatti, Iowa keessati namni sababa Covid-19 due 5,196 dha akkaata gabaasa Website Iowati. Woodbury County keessati, seaati 24 keessati namni haarawa qabame 21 yoo tau namni haarawa due hin jiru. Qorannoo bulti 14 keessati parsantiidhan namni ammati qabame jiru 6.9% dha.
Governori Iowa Kim Reynolds akka gabaasteti oduu guyyaa har’aa irrati, website taalidhaaf beelame it
By Fatiya Adam • Feb 11, 2021
Oromo News 02/10/2021
Governori Iowa Kim Reynolds akka gabaasteti oduu guyyaa har’aa irrati, website taalidhaaf beelame ittin qabatan akka jalqabee jiru himte. State website talaali gurmeesudhaf Microsoft itti dabalee jira. Torbaan lama keessati akka daddafiin deemu qabus himan. Ammas Reynolds akka jetteti rakkoon guddaan talaali kana state akka biyatiti talaali gahaa argachuu dhabuu isiiti jedhan.